ဝီကိ ရယ်…. တို့တွေရယ်… ဒန့်တန်တန်… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Education » ဝီကိ ရယ်…. တို့တွေရယ်… ဒန့်တန်တန်…
ဝီကိ ရယ်…. တို့တွေရယ်… ဒန့်တန်တန်…
Posted by thit min on Nov 30, 2011 in Education, How To.. | 14 comments
ဝီကိ(Wiki) အကြောင်းပါ။ ။
ဘွဲ့လွန်သင်တန်းတွေ( မာစတာ၊ပီအိတ်ခ်ျဒီ) မှာ ဝီကိက “ကိုးကား” ကိုလက်မခံတဲ့
တက္ကသိုလ်တွေ တော်တော်ကြား လာရတယ်။
“Refernce-ကိုးကား”မသုံးသင့်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျောင်းတွေ ထပ်တွေ့လာရပြန်တယ်။
ဝီကိလိခ်ရဲ့တချိန်က ဂယက်များပါမလားတော့ မသိဘူးနော်လို့စဉ်းစားမိသေးတယ်။
“ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စာတွေကလွဲရင်အွန်လိုင်း -ကိုးကား -သုံးလေ့မရှိတော့” ဘယ်လိုမှ မခံစားရပါဘူး။
ပြောရရင် သူ့(ဝီကိ)မှာလည်း “စာအုပ်ကိုးကားတွေ”ဟိုး အောက်ခြေမှာတွေ့နေရတာဘဲ။
အွန်လိုင်းကိုးကား သမားတွေက ဝဒ်ဆိုဒ် တခုကို ကိုးကားရင် တော်တော်များများ
ဝင်ကြည့်ရုံ ဝင်ကြည့်ပြီး ရှိတဲ့စာအုပ်ထဲကဟာလေးနဲ့ “တူတယ်”လို့ ထောက်ညွန်းဖို့လေးဝင်
အဲဒီ လိုအမျိုးအစား ခွဲပြီးရေးရတဲ့အပြင် ကိုယ်ဝင်ကြည့်တဲ့ ” Date-နေ့ရက်” ကိုပါရေးရပါတယ်။
ဆိုတော့ကျနော်ဝင် ကြည့် တုန်းက”ရှိတယ်”။
ကျနော်ဝင်ကြည့်တုန်းက အဲဒီအသီး ဆိုတာ “ချို” တယ်လို့တွေ့တယ်။
ခင်ဗျားဝင်ကြည့်တဲ့အချိန်က မတူတော့ “မရှိဘူး”၊ မချိုဘူး “ချဉ်တယ်” ဖြစ်နေတာဖြစ်မယ်လို့။
ငြင်းစရာ “ရ” နေလို့ပါဘဲ။
အကယ်ဒီမစ်ပေပါ (စာတမ်း) တခု မှာ References-ကိုးကားရည်ညွန်းဆိုတာရယ်။
Own Finding-မိမိရဲ့ “အသစ်” ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေက အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းပေါ့ဗျာ။
Literature Review-လစ်ထရေးချား ရီဗျူးလို့ခေါ်တဲ့ စာပေကိုးကားရည်ညွန်းကို
(အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို ဒီနေ့ အရင်းရှင်စနစ်က ကောင်းတယ်၊ နောက်နေ့မကောင်းဘူးလို့)
ပြောရရင်စာအုပ်ညွန်း ဆိုရင်တောင် အဲဒီစာအုပ်ကို (Page Number)စာမျက်နှာပါ ညွန်းရပါတယ်။
တင်းကြပ်တဲ့ စည်းကမ်းရှိတဲ့ အကယ်ဒီမစ် ဘုတ်အဖွဲ့များဆိုရင်တော့ အဲဒီစာအုပ်နဲ့
စာမျက်နှာအထိလိုက်ရှာကြည့်ပြီးအတည်ပြုချက်ယူတတ်လို့ နာမည်ကျော် ပညာရှင်အဖွဲ့အစည်း
တွေကထုတ်တဲ့ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာစာအုပ်များ၊ စာတမ်းများဟာ အတည်ပြုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပေးဖို့
အဲဒီ တနှစ်အတွင်းမှာ ဝီကိက “လေ” ပြောင်းသွားရင် စာတမ်း၊စာအုပ်ရေးထားတဲ့ သုတေသန
သမားခမြာအပယ်ခံရ(သို့) ပြန်လည်ရေးသားရတော့မှာမို့ ဆုံးရှုံးနစ်နာတာပေါ့။
အဲဒီတော့၊ အကယ်ဒီမစ်လိုင်းကလူတွေက Wiki-ဝီကိကိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးစာများမှာဘဲ သုံးကြပါတော့တယ်။
အကယ်၍ပေါ့လေ။မသုံးမဖြစ် ကိုးကားတော့မယ်ဆိုရင်တောင် ။(ရှားရှားပါးပါးပါဘဲ အဲဒါမျိုးဆိုတာတောင်)
Primary-ပရိုင်မာရီ(မူလကိုးကား-Book) ရဲ့အဆိုကို Wiki-ဝီကိမှာလည်းတွေ့ပါကြောင်းပေါ့ဗျ။
နောက်တနည်းကတော့ ဝီကိမှာအကြောင်းအရာတခုကိုရေးထားရင် ဟိုးအောက်ခြေမှာရေးထားတဲ့
စာညွန်း( References ) ဆိုတာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့ အဲဒီ စာညွန်းထားတဲ့ “စာအုပ်” ကိုလိုက်ရှာဖတ်ရပါတော့တယ် (ကိုးကားချင်ရင်)။
ပြောရရင် အကယ်ဒီမစ်ပေပါ (သုတေသနစာတမ်း) ရေးရတာ အရမ်းဂရုစိုက်ရတယ်ဆိုတာပါ။
စကားလုံးတလုံး ရဲ့ မူရင်း အဓိပ္ပါယ်နဲ့ သူ့ရဲ့ ဆက်နွယ်မှူ၊ဘယ်လို အမျိုးအစားဆိုတာအထိ သိ ရပါတယ်။
အကျိုးဆက်လား၊လုပ်ဆောင်မှုလား၊လုပ်ဆောင်သူလား ..အဲဒီလိုမျိုးသိရ ပါတယ်။
ပါဝါဆိုတာ စဉ်းစားရင် ကိုယ်ပိုင်ပါဝါ၊လုပ်ငန်းပါဝါ၊ လူအဖွဲ့အစည်းပါဝါ၊ နိုင်ငံအဆင့်အာဏာပါဝါ၊
နိုင်ငံတကာအဆင့် ဂလိုဘယ်ပါဝါ၊ဆိုပြီး ရှိတာပေါ့ဗျာ။
(အဲ…စွမ်းအင် ကိုလဲပါဝါလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့၊ အင်ဂျင်ပါဝါတွေ၊ရေအား၊နေစွမ်းအားပါဝါတွေကို
ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်”အချိန်မရွေး” ပြနိုင်ပါတယ် အဲဒီ စွမ်းအင်ပါဝါ ကိုလည်းခွဲပြီး “သိ” ရပါမယ်။
သဘာဝလား၊လူလုပ်စွမ်းအင်လား၊ ဘယ်လိုကောင်းကျိုး ဆိုးပြစ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။၊)
စွမ်းအင်မဟုတ်သော ပါဝါကို ဆက်မယ်နော် ……….
ဒီထက် နုရရင်ပန်းကလေး တပွင့်ရဲ့ ပါဝါ၊ မိန်းကလေးတဦးရဲ့ ချစ်စရာကောင်းသောအပြူအမူပါဝါ၊
အောင်လုပ်ဆောင် နိုင်တဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်တော့ ( Hard Power )ပါဝါအပြင်းစားပေါ့ဗျာ။
ကျောင်းမသွားလို့အရိုက်ခံရတာမျိုး ..က စလို့ …ကမ္ဘာ့စစ်ကြီးတွေအထိပေါ့။
အဲ..ခင်ဗျား အဖေကိုချစ်တယ်၊ အမေ့ကိုချစ်တယ်၊ ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်၊ရိုသေတယ်။
မယုံကြည်ရင် ဖမ်းလို့လား။နိုး ပါ။ ခင်ဗျား ယူအက်စ်မိဒ်မှ သဘောကျတယ်။ ဂျက်လီကိုကြိုက်တယ်။
ကိုရီးယားကား မကြည့်ရရင် အိပ်လို့မရဘူး။ ဆွဲအားတွေရှိတယ်နော်။
ဘယ်သူမှလည်း မခိုင်းဘူး။ မလုပ်လဲရတယ်။ ဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူး။
ဂေဇက် လာမဖတ်ရင် ဒါဏ်ကြေးဆောင်ရမှာမလို့ လာဖတ်နေတာလား။
သူငယ်ချင်း တယောက်ယောက်ရေးတာကို ကော်မန့်မပေးရင် ဘယ်သူကလာပြီး “စစ်ဆေးသတိပေး၊
အရေးယူမှာမလို့ ” အသဲအသန် ကော်မန့်ပေးတာလဲ။ ဘာမှဖြစ်ဘူး။ ခင်လို့။သံယောဇဉ်ကြောင့်။
တွေ့တယ်နော်။ပါဝါအပျော့ (Soft Power)။
(သံသရာကို မယုံကြည်သူများ ကျော်ဖတ်ပါ)
ကိုယ့်မိသားစု ကိုခင်တွယ်တတ်သော (Soft Power )။
ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းကိုခင်တွယ်တတ်သော(Soft Power )။
သူကြီးကိုလေးစားခင်မင်ကြသော (Soft Power)။
ကောင်မလေး ငယ်ငယ်ဟုထင်ပါက ဝိုင်း “အားပေး” တတ်သော (Soft Power)။
ဪ…. မန်းဂေဇက်ကို ခင်တွယ်နေကြသော (Soft Power )။
Soft Power များကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတယ် ဆိုတာ စိုးစဉ်းမျှ မသိလေရော့သလား …
ချစ်မိတ်ဆွေအပေါင်း သူတော်ကောင်း တို့။
အဲဒီလို စကားလုံးတွေကို Categorize-ကတယ်ဂိုရိုက်(အုပ်စုခွဲ)
Classification-ကလပ်စိဖိကေးရှင်း(အမျိုးအစားခွဲ) ပြီး “သိ” မှ
သုတေသန စာစောင်ကောင်း တစောင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ ဗျာ “စာလုံး” တလုံး တောင် အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ အဲဒီ “ရည်ညွန်းကိုးကားရာနေရာ”
ဒီ မန်းဂေဇက်မှာတော့ “ဘာမဆို” ကိုးကားလဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။
ကိုယ့်စိတ်နဲ့ ကိုယ် ဝီကိ ကိုးကားသူများကို ကန့်ကွက်ပြောဆိုနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့လဲ ပြောပါရစေနော်။
(ဟဲဟဲ ….သူကြီးမင်းကိုယ်တော်တိုင် ဝီကိနေတော့၊ တောင်းပန်ပါတယ်၊ လေးစားစွာပါ)
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ကျနော်လဲ ဝီကိ ဖတ်ပါတယ်။
အွန်လိုင်း (World Bank, Asian Development Bank, World Trade Organization, IMF)
Data-ဒေတာတွေ၊စာတမ်းတွေလည်း ဖတ်ရပါတယ်။နဲနဲ ပါးပါး ကိုးကားလည်း ကိုးကားပါတယ် ။
အဲ..သာတာက အဲဒီ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ စာတွေက အပြင်မှာလဲ တကယ် Publication-ပတ်ပလိကေးရှင်း
ရှိတော့ Rely-ရီလိုင်း(အားကိုး)လို့ ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။
ဝီကိလဲ ကောင်းပါတယ်လို့ သာ………………….။
ကျနော့်မတော့ အနှီဝီကီကို လက်ကိုင်ထားရပေမယ့်
ဆြာသစ်ပြောသလိုပဲ ….၀ီကီရဲ့ bias များဒဏ်ကို အတော်ခံစားရဖူးကြောင်းပါ..
လူအစုံက၀င် ရေးနေလေတော့ ….၀ှူး…
အထူးသဖြင့် လူပုဂ္ဂိုလ်လို အကြောင်းအရာမျိုးဆိုပိုဆိုး………..
တချို့သော ဆြာများက ကိုယ် လေးစားအားကျတဲ့လူ (လူဟာလူပဲဆိုတော့ အမှားအယွင်းအကျအပေါက်တော့ ရှိမပေါ့)
ကို မကောင်းရေးထားရင် အပြစ်တွေ ကို ဖော်ပြထားရင် ၀င်ဝင်ပြင်တယ်ခည …
အော် ဆော့ဖ်ပါဝါ ……
အဲ့သည့်မှာ ဇာတ်လမ်းက စတော့တာပဲ ….
(နာမည်တော့ ကျောလော့ပါဝူး … ဟိုဆြာသမားတယောက် အကြောင်းဖတ်နေတာ ..
မိန်းမ၂ယောက်ယူတဲ့ကိစ္စ တနေ့ကရှိသေးတယ် ဂနေ့ တွေ့လော့ဝူး…)
ဒါလေးကတော့ ၀ီကီကို ပြောင်ထားတဲ့ site လေးပါဗျာ ….
ဆြာတို့ကီးမြင့်တာတွေ ပြောကြလို့ ကျနော် အုံးပူလာရင်
၀ီကီကို ပြင်လို့ရနေတော့ သူလဲ အမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတော့တာပဲ …
တစ်ခါက ကျွန်မအတိအကျသိနေတဲ့အရာတစ်ခုကို ၀င်ကြည့်လိုက်တာ လွဲနေတာတွေ့လိုက်မိတယ် … အဲဒီနောက်ပိုင်း ၀ီကီကို နဲနဲလန့်သွားတယ် …
အရင်တုန်းက သုတေသနစာတမ်းမျိုးတွေ ရေးခဲ့ဖူးတယ် …
MG ထဲရောက်တော့မှ ကိုယ့်စိတ်နဲ့ကိုယ် ရေးချင်တာရေးလို့ရလို့ အလွန်သဘောကျပြီး တွေးမိတိုင်းရေးရင်းနဲ့ ပြန်မထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး သုတေသနစာတမ်းဆိုရင် အလွန့်အလွန် တီကောင်ဆားနဲ့တို့လိုက်သလို ကြောက်နေပါတော့တယ် …
သဂျီးကတော့ ၀ီကီ အားကိုးပြီး ဘာသာရေး နိပ်ကွပ်ခဲ့ပေါင်း မနည်းဘူး။
အဲဒါကြောင့် သဂျီး ကို ၀ါတာကာလာ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး မိုးပြာ စသဖြင့် ရွာသားတွေ သမုဒ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါလည်း မရဘူး ဘယ်သူက ဘယ်ဝါ သုသေသန စာတမ်း ဘာညာနဲ့ လုပ်သေးတယ်။
အခုလို ရေးတာ အားကြီး ကျေးဇူးတင်တယ်။ သူ ရေးသမျှ မနည်း ရှာဖွေပြီး တော်တော် ခေါင်းစားခဲ့ရဖူးတယ်။ အခုတော့ မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာ များတယ်။ ဒါတောင် ဒီတလော လက်က တော်တော် ဇ ပေါ်လာလို့ မနည်း ချိုးနိမ်ထားရတယ်။
ဝီကီ ကိုရည်ညွန်း လို့ ကိုယ်ပြောပြ ချင်တဲ့ အချက် မခိုင်လုံ ဘူးလို့ ပြောလို့ မရပါဘူး ။ Reference တွေလည်း ဖော်ပြထားတာ ပဲ။သုတေသန ၊ နိုင်ငံရေး နဲ့controversy ဖြစ်တဲ့ လူ ရဲ့ အကြောင်းဆိုရင် တော့ တမျိုးပေါ့ ။ ဘလိုင်း ချည်း ရေးနေတာ ထက်စာရင် ဝီကီ နဲ့ ရည်ညွန်း လို့ပို ဝေဆာတာ ပေါ့ ။ ဝီကီ ဘာကြောင့် အခုထိ ရှင်သန် လူသုံးများ နေလဲ ???
ဝိကီကို ကျောင်းအတော်များများမှာ ရည်ညွှန်းကိုးကားသုံးဖို့ လက်မခံပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဘာအရေးလည်း အခြားကိုးကားစရာ ဆိုက်တွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။ အိမ်စာလိုမျိုးအတွက် ပြောတာပါ။ စာတမ်းလို အတည်အတံ့ဆိုရင်တော့ သေချာရှာရမှာပေါ့နော်။ သာမန် အလွယ်ရှာလိုသူများ အတွက်တော့ သင့်တော်ပါတယ်။ အစုံရှိတာကိုး…
ပြောမယ်ပြောမယ်နဲ့ မေ့နေတယ်။ ဆရာသစ်စာထဲမှာ နက်ဖ်တာစာချုပ်ကို အီးယူအဖွဲ့နဲ့ ပြိုင်ဖို့လို့ ဖတ်မိလိုက်တယ်။ ကျနော် ဖတ်ဖူးတဲ့စာတပုဒ်မှာ အဲသည့်အချက်အပြင် တရုတ်ကြီးရဲ့ ဩဇာကင်းလွတ်တဲ့ ကုန်သွယ်ရေးဇုံ တည်ထောင်တာလို့ မှတ်သားဖူးတယ်။ နိုင်ငံတကာ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများအားလုံးက တရုတ်ပြည်မှာ သွားရောက်မြှုပ်နှံတဲ့အခါ တနိုင်ငံထဲမှာ စုပြုံနေလို့ ဖြစ်လာတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး ဟန်ချက်ပျက်ယွင်းမှုကို အိမ်နီးချင်း မြောက်အမေရိကတိုက်နိုင်ငံများအား ကုန်သွယ်ရေး အခွင့်အရေးများပေးပြီး တဖက်တလမ်းမှ ထိန်းညှိခြင်းလည်း ပါတယ်လို့ နားလည်ပါတယ်။ အဲဒါအပေါ် ဆရာသစ်ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်လေး သိပါရစေ။
နောက်တချက်ကတော့ ခေါင်းထဲပေါ်မလာဘူး။ မေ့နေလို့ နောက်မှ မေးပါရစေ။။
၀ီကိကို ကျွန်တော် မသုံးဘူးပါ။
အကြောင်းအရာအစုံကိုရှိတဲ့ ဆိုဒ်ပါ။စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်။
ဖတ်လို့ ရမှာပါ၊လွယ်လွယ်ရေးထားတာများပါတယ် ခင်ဗျ။ဝင်ကြည့်ကြည့်ပါ။
အားလုံးကိုအပေါင်း တစ် ပေးပြီး ကျေးဇူးတင်လွှာကိုရေးပါမည်။
အရက飯田 絢香 ရဲ့ I believe myself, ရှင်ဂျီရု ကိုတိုဒဲ့= ယုံကြည်ချက်နဲ့ လုပ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်။
(ဟဲဟဲ မစ်ကဆုကိ=သုံးရက်လ ကိုသာ ဆိုလိုက်ရင် ညီ”ငို”မှာ စိုးလို့ )
ကြုံလို့ပြောရအုန်းမယ် ကိုရင်ဂိုရယ်၊အဲလက်စ်ရယ် မဖွင့်ရဲ့ဘူး။အများကြီးဘဲ ဂျပန်သီချင်းတွေ။
နမိဒနော့ကစ်စ်၊ဆဘိုးတဲန်းနိုဟန၊ပြောလို့တောင်မကုန်းနိုင်ဘူး။ “လေ” တယ်။
အဲဒီ အရက သီချင်းကြီးလဲ ဒီအတိုင်းကြီးကော်ပီထားတယ်။
အာဒံရယ်၊ဧဝရယ်မှာလည်း အဲဒီကော်ပီ ကိတ်စညှိနေတယ်လို့ကြားတယ်။
“ပြောင်းလဲ တတ်တဲ့မင်း( Wiki ) ကို တို့ဘယ်လိုမှ နားမလည် ”
“ဘယ်စကားတွေ ဘယ်အခါတုန်းက ကို ပြောမိမှားတာလဲ
“ဘယ်အပြူမူ ဘယ်အချိန်တုန်းက ကို လုပ်မိမှားတာလဲ
ပြည့်စုံ စိတ်ချ သုတေသန အတွက် ရည်ရွယ်ရေးသား တာပါ။
ပေါ့ပေါ့ပါးပြောဘို့ဆိုရင် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ညွန်းနိုင်ပါတယ်။သဘောတူပါတယ်။
ဝဒ်ဆိုဒ်တခု ကြာကြာရှိနေနိုင် တာ လူသုံးများတာနဲ့တော့ မပြောပါနဲ့။
ကိုကြောင်ကြည့်နေတဲ့ ဝဒ်ဆိုဒ်တွေလည်းကြာလှပေါ့နော် ကိုကြောင်။
“အပြစ်မမြင်ပါဘူး၊ မ”ကိုး” ချင်တာဘဲ ရှိတယ်နော့ ဟော့ဟော့ ”
ဟာ လုပ်ပြန်ပြီ။ကျနော် နက်ဖတာပေပါ ရေးပြီးသားတွေ ရှိတယ်။။
ခု လောလောဆယ် အလုပ်တွေ ပိ နေလို့ဗျ။
ပဲန်းဒင်းတွေ များနေတယ် လက်တွေ့အလုပ်တွေမှာကို။
ဆီမိနာတွေမှာ ကျတော့ စကော်လာတွေ ကပြောတာဆိုတော့ အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဗျ။
ဂေဇက်ကကျတော့ အရပ်ထဲကလိုလဲပြော၊ ပညာရှင်လိုလဲပြော၊ အတွေ့အကြုံနဲ့လဲပြောလို့
ဂေဇက်က ကော်မန့်တေတာတွေ ကို ကျနော် တကယ် တန်ဖိုးထားလေးစားပါတယ်။
ကျနော်တို့တွေက ကိုယ့်”စာ” တွေကို အပြစ်ပြောရင်တောင် ကြိုက်တတ်တဲ့ သူတွေဖြစ်နေပါပြီ။
အဲ တခုဘဲ အားဂရူးမန့် တခုရဲ့အချက်အလက်တော့ပြည့်စုံရမှာပေါ့ဗျာ။(အဲ ခိုင်လုံရမှာပေါ့ဗျာ )
နည်းနည်းပြောရရင်တော့ အိုင်ဒီအိုလိုဂျီတိုက်ပွဲ ဆိုဗီယက်ကြီးနဲ့ တိုက်ခဲ့ရတာကစရမှာဘဲ။
ကွန်မြူနစ်နဲ့ ဆိုရှယ်လစ်ဆိုတာ အဖေတူသားတွေမဟုတ်လား။
ဒါပေမဲ့ စွမ်းအင်ပြဿနာ၊ ပေါ်လူးရှင်းပြဿနာနဲ့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းပြဿနာတွေက
အီးယူရဲ့ Most Favoured Nation (MFN) အခွင့်အရေးပေးကုန်သွယ်နိုင်ငံ၊
Zero Tariff- ဇီးရိုးတာရစ်ဖ်-သွင်းကုန်ခွန်လွတ် တွေတကယ်လုပ်နိုင်တာတွေ့ရတော့
ဘယ်သူမှ မလုပ်သေးတဲ့ စတိုင်နဲ့ နာဖတာ ကို စလုပ်လိုက်တယ်။
နာဖတာရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက်မှာ ကို က အရင်းအနှီးပြောင်းရရွှေ့ရေးဆိုတာကြီးကပါနေလေတော့
ဘယ်လိုစဉ်းစား စဉ်းစား အဲဒီ ထရဲန်း က ရေးလို့ပြောလို့ ရတာမျိုးပါဘဲ။
“အရင်းအနှီး နဲ့ စီးပွါးရေးပါဝါ Unbalance-အန်ဘယ်လန့်စ်” ဆိုတဲ့ စကားကိုပြောလို့ရနေပါတယ်။
အဲဒါ တရုတ်မှမဟုတ် ဘူး။ကြီးလာမဲ့ ဂျပန်၊အာရှနဂါး၊ကျားတို့ အကောင်တွေအကုန် ဆိုင်ပါတယ်။
ပြောရရင်ဗျာ။ သူ့ဂွင်ထဲ ဆွဲသွင်းတာပေါ။့
နိုင်ငံခြားက ကန်ပနီ တခု ကနေဒါ၊မက္ကစီကို၊ယူအက်စ်၊ ဘယ်မှာဘဲ လာရင်းနှီး ရင်းနှီး၊
ထုတ်သမျှဟာ ကိုဒီ ၃ နိုင်ငံက အခွန်လွတ်၊(သို့)အခွန်သက်သာခွင့်% နဲ့ဝယ်ပေးမယ်ဆိုတာမျိုး။
အဲဒါနဲ့ နာဖတာကြီး ထိပ်သီးကုန်သွယ်ရေးဂဏန်းကြီးရသွားတယ်ပေါ့ဗျာ။
ကျနော် တွေ့ထားတဲ့ ဒေတာတွေအရတော့ အဲဒီ အဝတ်အထည်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ အားနဲနေတယ်ဗျ။
ဟာ အဲဒီဈေးကွက်ကို ထိုင်းတော့ရပြီလို့ ထင်နေတာဗျ။
(199-2000) ထိုင်းနဲ့ အင်ဒိုနဲရှားအပြိုင်သွင်းကြတာပေါ့။
တခြားနိုင်ငံတွေလဲ သွင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ ၃နိုင်ငံလိုအပ်ချက်ကို၊မမှီဘူးဗျ။
အဲ တကယ်တမ်း မတ်စ်ပရိုဒါတ်ရှင်းလုပ်နိုင်တဲ့ တရုတ်လဲဝင်လာရော
အဲ နောက်တော့ တစိမ့်စိမ့်နဲ့ ဝင်လာတာက ၂၀၀၁ မှာ ဒဘလျူတီအို ကိုဝင်လိုက်တဲ့ကိုတရုတ်က
အဲဒီ ဈေးကွက်ကို အရယူတော့တာဘဲ မိတ်ဆွေကြီးစနေကြောင်ကြောင်ရေ။
နာဖတာက အခွန်လို့ပစ္စ္စ္စ္စ္စ္စည်းတွေ သက်သာအောင်ထုတ်ပြီး ဝင်လာတာကိုး။
ရောင်းလေ သူကတူလိုက်တဲ့ အတုတွေရှိပြီးသား။တရုတ်ဘာသာ မန်နူရယ်လေးနဲ့ ဟီဟီ။
အမေရိကန်ကို ဘယ်လိုတိုက်လို့ရမယ်လို့ နောက်တော့တရုတ်ကြီးကို “သင်”ပေးသွားတာက
ဘာနည်းပညာမှ မပါဘဲ ၊ခေတ်ဟောင်းပုံစံ လေယဉ်အပိုင်စီး၊ဝါးထရိတ်စင်တာကို ဝင်တိုက်တယ်ဆိုတာ
ဘာ “ညူကလီးယား၊ ဘာ ဟိုက်တက်မှ”မဟုတ်ဘူးလေ။
အဲဒီ လိုမျိုး အောက်စလွတ်နေတဲ့ အမေရိကန်ကို “ဟာ”နေတဲ့ အဲဒီနေရာလေးကို “သ” ပြီး
ဟာသ မြောက်စွာ အနိုင်ယူခဲ့တာပေါ့။
နာဖတာ နဲ့ အီးယူ၊ တရုတ်၊ဂျပန်၊အာရှနဂါး၊ကျားတို့ကို တွင်းထဲ ထဲ့ထားမယ်လို့စဉ်းစားတဲ့ ဟိုက်တက်ကို
လေးခွနဲ့ ဆော်သွားပါကြောင်း ပေါ့ဗျာ။(^^)
ဂီတဆောင်းပါးတပုဒ်တော့ ရေးလက်စရှိပါတယ်ဗျ..အနှီ copyright ကိစ္စတော့ မဟုတ်ဘူး.. ဟီး..
ဂီတမှာ အများဆုံး ၈ဘားအထိ တူခွင့် ရှိတယ်လို့ ဥပဒေရှိတယ်ဖတ်ဖူးတာပဲဗျ…
(အမှတ်မှား မလားတော့မသိဘူး Vanilla Ice caseလားပဲဗျာ…)
သံစဉ်လေးက ၇ခုပဲ ရှိတာ …ကမ္ဘာ့တနေရာက artist တယောက်ရေးချလိုက်တဲ့ သီချင်းနဲ့
နောက်တနေရာက ဆြာရဲ့ သီချင်း ဘယ်တော့မှ ဘယ်လိုမှ တူတယ်ဆိုတာ မရှိတာဟာ ..
ဂီတ ရဲ့ မှော်ပါပဲ ….
local မှာတော့ ဆြာသစ်လည်း သိတဲ့အတိုင်း ပျော်ပျော်ကြီး copyကြတယ်..
ဆြာကြီး band တွေတောင် Notes တွေထုတ် အဲ့လာတွေကြက်တူရွေး နှုတ်တိုက် အတီးကျင့်
ရပီဆို စတူရီယိုပြေး ၁လိုင်း သွားထပ် …. ဟုတ်နေဒါ ဟုတ်နေဒါ ….
သည်ခေတ်မှာ ပိုလွယ်သွားပြီ ….ထားပါတော့ G’N’R ရဲ့ patience ပြန်ဆိုမယ်ပေါ့ ..
အင်တာနက်ထဲဝင် guitar pro တို့လို notes လေးတွေ ရှာ … စက်ထဲထည့်
တလိုင်းချင်းဖွင့်ပြီး ကြည့် ..catewalk, cubase, acid, fruity ကြိုက်တာသုံးပီး
အသံပြန်ထည့် …(ကောင်းထှာ …) ..
မတီးတတ်ဘူးနော် ရသေးတယ်…youtube ပေါ်မှာ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပီး
အလကား သင်ပေးမယ့် ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ဆြာကြီးသေးပိစိကွေးတွေ တပြွတ် ….
တကယ်လို့ကျနော်သာ ..လိုကယ်လ်က ဆြာတယောက်ယောက်ရဲ့ အုန်းမ်ကျုန်းကို
စာသားအသစ်သွင်း ပြီး ဆို ထုတ် ..လုပ်ချ လို့ကတော့ …မနက်သစ်စရာ မျက်နှာတောင် ရှိမှာမဟုတ်..
(တရားကြတာများပြောပါတယ် ..ဟီး …..)
Ayaka လေးပါလာပီဆိုတော့ ပြောရတော့မှာပေါ့…သူကလေး နောက်နှစ်ပြန်လာမယ်ပြောတယ်ဗျ…
ဒါပေမယ့် သိပ်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာတခုက အိမ်ထောင်ကျသွားတာပါပဲအီး….ဟီး …. ရွှတ်….
ဦးလေးရေ ပြန်ရှာရမှတော့ မျက်စိနောက်လို့ မရှာပြချင်တော့ဘူး ဒီရွာထဲမှာပဲ ရှိကို ရှိတယ်။ ရွာထဲက ဘိုးတော် ကြောင်ကြီး တို့ အန်တီဝေ တို့ သက်တော်ရှည် ရွာသားတွေကိုသာ မေးမြန်းကြည့်ပါတော့။ ဘယ်လို သတ်သတ် ၀ိုင်းသတ်တောင် မသေဘူး ငါမသေဘူး ၀ီကီ ရှိတယ် လုပ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ကျွန်တော်က တော့ ဆ၇ာ သစ်မင်းရဲ့ပို့ စ်တွေကို ဖတ်တာများပါတယ် ။ ၀ီကိကိုတော့ သိပ်မဖတ်ဖြစ်ပါဘူး။
ဆရာသစ်မင်းရဲ့ ပို့စ့်တွေက ပြီးပြည့်စုံသော သုတ နဲ့ ရသ တွေကို ပေးတတ်လို နှစ်သက်စွာ…ပြီးတော့ လေးစားစွာ. ဖတ်နေရပါတယ် ။
ကိုသစ်မင်း ဒီလိုလေး ရေးပြတော့ ၀မ်းသာတယ်.. ကိုယ်တိုင်လည်း အသိတယောက်ဒီကိုပြန်လာစဉ်က စကားစပ်တော့ ပြောတာကို ကြားဖူးပါတယ်…
ဟုတ်ပါတယ် ၀ီကိက အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ် .. သို့သော် ကိုသစ်မင်းပြောသလိုပါပဲ တကယ့်တကယ်ပွဲတွေ့မှာ သူက ထောက်စရာလေးတွေ ရှိနေတယ်တဲ့ ..သူ့ကိုပဲ အားကိုးလို့မရဘူးတဲ့ သူညွှန်းတဲ့ စာအုပ်ကိုပါ လိုက်ဖတ်နိုင်အောင် လုပ်ရပါတယ်တဲ့…အဲ့ဒီလိုပြောတာကြားဖူးတယ်
ဒါကြောင့် သူကြီးက ချဉ်ပေါင်ရွက်ကို ၀ီကိ ကိုင်ပြီး ပြောတုန်းက သူ့ချည်းပဲတော့ မလုံလောက်ဘူးလို့ ပြောခဲ့တာပါ..
လက်တွေ့ ပြည်ပမှာ စာတမ်းလုပ်နေတဲ့ သူက ပြောပြသွားလို့ပါ….
သူကြီးက ပြောပါသေးတယ် အရင်ခေတ်က ရေးတဲ့သူတချို့ရဲ့ စာများဟာ သူတို့တွေရဲ့ အာဘော်တွေ အမြင်တွေ ထည့်ထားလို့ ကိုယ်ပိုင်အသိလေးနဲ့ ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်…
အရင်တုန်းက စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီး ဖင်ပိတ်ငြင်းတဲ့လူကိုလည်း တွေ့ဖူးတယ် ထရိုက်ပစ်ချင်တယ်လို့ လည်း ပြောပါတယ်….
စာရေးသူများရဲ့ အာဘော်နောက်ကို လိုက်ပြီး မှိုင်းမိပြီး အမှန်ကို မမြင်နိုင်မှာ စိုးလို့ စေတနာနဲ့ ပြောတာပါ.. အဲ့ဒီထောက်ပြချက်ကို လက်ခံပါတယ်
သို့သော် သူကိုယ်တိုင်ကတော့ ၀ီကိကိုင်ပြီး ဖင်ပိတ်ငြင်းတဲ့ အကျင့်ရှိပါတယ်.. အားလုံးက သိပါတယ်
အပြင်မှာ ဆုံဖြစ်လို့ ရွာ အကြောင်းပြောရင် အဲ့ဒါကို အမြဲပြောလေ့ရှိပါတယ်.. ရွာထဲမှာ တော့ ဘယ်သူမှ ဘာမှ မပြောပဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာပါ….
စကားမစပ်ပြောရရင် မန္တလေးက ရွာသူားတွေ ဆုံဖြစ်တယ် သိပ်မကြာခင်က နီးစပ်ရာလေးတွေပါ
ကျမတောင် နောက်ကျသွားလို့ လူကြီးတွေကို အားနာရသေးတယ်…
စကားလုံးတစ်လုံးချင်းကို စီစစ်တဲ့ ပညာရှင်တွေဆိုလို့ တစ်ခါက မြန်မာပြည်မှာ ဘိုခင်ညွန့်က ဦးဆောင်ပြီး Think Tank လိုမျိုး ပညာရှင်တွေ ကို ဝိုင်းထိုင်ခိုင်းပြီး ဆွေးနွေးစေတယ်။ အဲဒီမှာ သူပုန်ကို ဘယ်လိုသုံးမယ်။ သောင်းကျန်းသူလို့ မသုံးပဲ လက်နက်ကိုင်ဆန့်ကျင်သူများသုံးမလား။ အလင်းဝင်တယ်သုံးမလားဆွေးနွေးကြတော့ ရူပဗေဒပါမောက္ခ ဒေါက်တာစိန်ထွန်းက သူ့ခွင်ဝင်လာပြီမို့ အလင်း နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောမယ် ဆိုရင် အလင်းဆိုတာ အမှုန်သဘော နဲ့ လှိုင်းသဘော ဆောင်တဲ့ dual nature ရှိတဲ့ particle ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ပါ ထည့်တွက်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း အရှည်ကြီးထပြောပါတော့တယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ပညာရှင်တွေ မဆီမဆိုင်တွေကို တခမ်းတနား ပြောတတ်ကြပုံများ အဲသလိုပါပဲ။
ဟုတ်ကဲ့ တခါတလေ အမှန်လေး တခုရေးရ အောင် ဟိုပါတ်ရေး၊ ဒီပါတ်ရေးဗျ။
လူတွေရဲ့စိတ် တွေ ပြောင်းဘို့လေးပါ။.။ငါနဲ့မတူငါ့ရန်သူစိတ်ဆိုတာ ကလေးကွက်တွေဆိုတာ
သိစေချင်လို့ပါ။ လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲခွင့်နဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှူဆိုတာလေး။(^^)
ဘဏ်အကြောင်း ဆောင်းပါးလေးတွေ ရေးပါအုန်းဗျ။